कृत्रिम यौनाङ्ग (सेक्स टोय) को बिक्रि बढ्दै, नेपालमा कति पर्छ त मूल्य? कहाँ कहाँ किन्न पाइन्छ? – Khabar Art Nepal
कृत्रिम यौनाङ्ग (सेक्स टोय) को बिक्रि बढ्दै, नेपालमा कति पर्छ त मूल्य? कहाँ कहाँ किन्न पाइन्छ?
By खबर आर्ट नेपाल	 On ३० चैत्र २०७५, शनिबार ०७:४८
चैत्र ३०खबर आर्टनेपाल । कृत्रिम यौनाङ्ग सेक्स टोय हरुमा पुरुष र महिला दुवैका पर्छन् । विशेषगरि महिलाको लागि पुरुषको पेनिस र पुरुषको लागि महिलाको भेजिना आवश्यक हुन्छ । पुरुषले प्रयोग गर्ने सेक्स टोयमा २५ सयदेखि २५ हजार सम्मका छन् । त्यसैगरि महिलाले प्रयोग गर्नेलिङ्ग २५ सयदेखि ७५ सय रुपैंयाँ सम्मका छन् ।
खासगरी व्यस्त मानिसहरुका परिवारहरुबीच लामो समय सम्मयौन सम्पर्क हुन पाउँदैन भने लामो समय विदेश गएर बस्नेहरुका श्रीमान श्रीमती पनि यौन समागमबाट टाढा हुन्छन् ।
त्यसैले त्यस्ता मानिसहरुलेसेक्सटोयहरुको प्रयोग गर्ने गर्दछन् । नेपालमा बैदेशिक रोजगारका लागि अधिकांश नेपालीहरु विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ । यसले गर्दा परिवारबीच लामो समय भेट हुँदैन । लामो समय एकल बस्नु पर्दा मानिसले अनैतिक सम्बन्ध राख्ने पनि हुन्छन्, त्यसको लागि यस्तासेक्स टोयको प्रयोगले अनैतिक सम्बन्ध राख्नबाट बचाउँने यौनस्वाथ्य सम्बन्धका चिकित्सकहरु बताउँछन् ।समाजमा त्यही अनैतिक सम्बन्ध कायम नहोस् भन्नको लागि नै यीसेक्सटोयहरुको उत्पादन भएको होकण्डम हाउसका सञ्चालक न्यौपाने भन्छन्– ‘यसको सहि रुपमा प्रयोग गर्दा यसले कुनै नकारात्मक असर पर्छ जस्तो लाग्दैन् ।
कति हुन्छ खपत, कस्ता हुन्छन् सेक्स टोय:
अनलाइनबाट पनि किनमेल:
अनलाइन बिजनेस मेरो सपिङले तीन वर्षदेखि सेक्स टोयको व्यापार गर्दै आएको छ । मेरो सपिङ पनि पुरुषको तुलनामा महिलाका लागि दोब्बर संख्यामा सेक्स टोय बिक्री हुने बताउँछ । मेरो सपिङमा भने अत्यधिक मात्रामा टिन एजर्सले सेक्स टोयको माग गर्ने गर्छन् । तर, उनीहरूले आफ्नो परिचय भने राम्रोसँग नखुलाउने गरेको सञ्चालक बताउँछन् । भाइवर, फेसबुक म्यासेन्जरमार्फत पेनिस, टाइटेनिङ जेललगायतका सामग्री मगाउने गर्दछन् । तर, अनलाइनमा यस्ता सामान मगाउनेले आफ्नो नाम सत्य नबताउने मेरो सपिङका सञ्चालक बताउँछन् । भन्छन्, ‘उहाँहरूले साथी वा आफन्तलाई चाहिएको उल्लेख गर्नुहुन्छ र आफ्नो नाम पनि बताउनुहुन्छ ।
किशोर-किशोरी र महिला पनि , अश्लील चलचित्र लतमा परेका छन्